Barcelona Oo Suuqa Dhigtay Ousmane Dembele, Miyuu Neymar Jr Sabab U Yahay? - Gool24.Net
Barcelona Oo Suuqa Dhigtay Ousmane Dembele, Miyuu Neymar Jr Sabab U Yahay?
Waxaa soo baxa war sheegaya in maamulka kooxda Barcelona ay suuqa soo dhigeen xidiga reer France ee Ousmane Dembele kaas oo ay hadda suurtogal tahay in la iibin doono inta lagu jiro suuqa xagaagan.
Majalada caanka ah ee Kicker oo laga leeyahay dalka Germany ayaa shaaca ka qaaday in maamulka sare ee Barcelona ay suuqa soo dhigeen adeega Ousmane Dembele.
Ousmane Dembele ayaa lacagtii abid ugu badnayd ee Barcelona xidig kula soo wareegtay ku soo gaadhay Camp Nou ka hor intii aanu Philippe Coutinho rekoodhkiisa jabin laakiin Dembele ayaa dhaawacyo soo noqnoqday ku lumiyay taageero badan oo uu haystay.
Markii uu Ousmane Dembele soo gaadhay Barcelona waxaa laga qabay rajo wayn kadib markii uu bandhig cajiib ah ku soo sameeyay kooxda Borussia Dormund laakiin dhaawicii ugu horeeyay ee soo gaadhay oo uu muddo dheer la maqnaa ayaa kalsoonida ka lumiyay.
Majalada Kicker ayaa lagu shaaciyay in Barcelona ay doonayso sidii ay xidiga reer France ee Ousmane Dembele u iibin lahayd si ay lacag ugu hesho saxiixyada Neymar Jr iyo Antoine Griezmann.
FIFA ayaan ogolaan in kooxi ay xili suuq dhamaysato iyada oo kooxdeedu ku jirto khasaare -100 milyan yuro ah, waana sababta Barcelona ku qasbaysa in ay ciyaartoy uu Ousmane Dembele ka mid yahay iibiso haddii ay doonayso in ay la soo saxiixato Neymar JR iyo Griezmann oo lacag aad u badan isla noqonaya.
Xogta uu bixiyay Kicker ayaa markiiba si wayn ugu faaftay dalka Germany halkaas oo ay Bayern Munich ka mid tahay kooxaha xiisaynaya in ay la wareegaan Ousmane Dembele.
PSG ayaa iyaduna u furan in ay heshiiska Neymar Jr qayb kaga dhigan karto Ousmane Dembele halka Liverpool ay sidoo kale ahayd kooxaha lala xidhiidhinayay xidiga reer France.
Bayern Munich ayaa qorshaha labaad ee bartilmaameedkeeda Leroy Sane waxay ka dhigatay saxiixa Ousmane Dembele waxayna hadda heli kartaa fursad ay wada xaajood kula bilaabi karto Camp Nou.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona ayaa haddaba kooxdeeda ka dirtay Denis Suarez, Jasper Cillessen iyo Andre Gomes oo ay dhamaantood iibisay halka afar xidig oo kale oo uu Thomas Vermaelen ka mid yahay ay si xor ah maanta ku baxeen.